China Wool Dryer Ball fekitori uye vagadziri | Huasheng
Chinyorwa:100% New zealand Wool, kana tsika
Kurema kweBhora: 12g, 15g, 20g, 42g, 55g, 85g, 100g
Bhora Dhaidhi:4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm, 10cm
Ruvara: Ita kurongeka
Package: Machira mabhegi 6 pack, kana kuti akaita kurongeka
Mabhola eWoer akaomeswa anogara achigadzirwa ne100% New Zealand mvere. Hazvizoregi uye zvichagara kwemakore. Saizi yavo yakaringana nehupamhi hwekuomesa basa zvakanyanya. Iwo akanakira fluffing pasi minhenga zvinhu zvakadai quilts uye jaketi. Uchishandisa mabhinda akaomeswa emucheka anochengetedza ganda rako kubva kumakemikari anoshandiswa mumashamba akaomesesa uye mumucheka wemachira zvinyoro, uye zvakare rino chengetedza pakaomarara pane zvakasara zvasara pane izvi. Iyo yakasarudzika hupfumi kune emakemikari-akaremerwa uye ane chepfu maomesa mashitsi uye machira anofefetera. Ivo vanonyanya kukurudzirwa ma diapers evacheche uye zvipfeko, uye kune vanhu vane ganda rakatsetseka.
* Edza kunongedza mabhora anoomesa nekuisa madonhwe mashoma emafuta akakosha (lavender, ndimu nezvimwewo) pane rimwe bhora. Izvi zvichapusa kunhuhwirira zvipfeko zvako!
* Deredza static mberi nekuita kuti zvipfeko zvisati zvakawoma-zvaomeswa. Edza kubvisa mbatya nekukurumidza kupfuura zvaunowanzoita.
* 3 pack yeWool Dryer Mabhora emutoro mudiki.
* 6 pakiti yeWool Dryer Mabhora emutoro wakakura.
Sei Tisarudze Yedu Yebwe yakaoma mabhora?
Sunungura Yakagadzika uye Yakareruka Laundry: Inobatsira kuderedza tuli kunamatira nekudzikisira kutaurirana pakati pezvipfeko. Iyo yekuwachira ichave yakanyoroveswa zvoga uye mikwende inodzivirirwa zvinobudirira nekuda kwekudzikiswa kwekupokana.
Chengetedza Machira ako uye Ganda: Organic, eco-laundry, hypoallergenic, isina makemikari kana anokuvadza ekuwedzera. Yakakodzera yeganda rinonamira, ma tauro, vanyaradzi, zvipfeko, machira ekuwachira, machira emachira uye zvipfeko zvevatumbi etc.Save Nguva Yako Nesimba: Mabhora emvere-anotora emvere anokanda akatenderedza muomesa, ita kuti nguo yacho iome nekukurumidza, ichidhonza mvura yakawandisa kunze. yehembe dzako.Ridza nguva yako yekuomesa ne20% -45%.
Eco-Shamwari Chisarudzo: Kusiyana nemashamba akaomeswa anoramba achikandwa kure mushure mekushandiswa kwese, mabhandi edu emuchina anodzoreredza mabhora anobatsira iwe kuchengetedza mari, kuderedza marara uye kuchengeta mbatya dzako kunyange dzakanyorova kupfuura dzakare.
1. Manual bonding, inogona kushandiswa kakawanda
2. Kuomesa nekukurumidza, kuponesa simba
3. Deredza magetsi emagetsi
4. Wemvere dzemakushe, hapana makemikari
1. Shandisa 3-4 mabhora eiri diki / yepakati mutoro uye 5-6 mabhora emutoro wakakura.
2. Kuti ushandise ivo, ingoisa ivo mune yakaoma uye visiye imomo. Zvakareruka!
3. Iwe unogona kuwedzera kunhuhwirira kumachira ako nekuisa madonhwe mashoma emafuta akakosha pane rimwe bhora.
4. Hapana chikonzero chekushambidza mabhora ako akaomeswa ewakadzi sezvo ari mune yakaoma chete neakachena nguo
5. Zvisinei kana vachida kucheneswa ingoisa mu washer pane inodziya uye yakaoma mune yakaoma.
Yepfuura: Felt pouch (akanzwa magirazi kesi)
Inotevera: Yakadzvanywa Wool Yakanyungudika